Mitady tonian-dahatsoratra ny Global Voices hitarika ny fandrakofany momba an’i Azia Afovoany Lehibe. · Global Voices teny Malagasy
Mitady tonian-dahatsoratra ny Global Voices hitarika ny fandrakofany momba an'i Azia Afovoany Lehibe.
Ny fetra fisoratana farany dia amin'ny 14 feb 2021, 11:59 alina EST (GMT -4)
Voadika ny 05 Febroary 2021 7:23 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, ਪੰਜਾਬੀ, English
Sarin'ny tsena Osh any Bishkek. Saripikan'i Filip Noubel, nahazoana alàlana.
Mpanoratra sy mpamoaka lahatsoratra manana fahatakarana sy fahalianana lalina ny lafiny momba an'i Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan ary Uzbekistan ve ianao? Marisika ve ianao hamadika hevitra ho lasa tantara, lahatsoratra amin'ny haino aman-jery sosialy ary vokatra fanontàna hafa miaraka amin'ny vondrompiarahamonina iray marolafy?
Raha namaly hoe “eny” tamin'ireo fanontaniana etsy ambony ianao, azonao atao ny mieritreritra ny hangataka ny asan'ny tonian-dahatsoratry ny faritra Azia Afovoany Lehibe.
Ho andraikitry ny tonian-dahatsotratry ny faritra ny fikiràna / fanitsiana ny tantara nosoratan'ireo mpirotsaka an-tsitrapo ato amin'ny Global Voices ary ny fanoratana tantara momba ny faritra. Mifantoka amin'ireo lohahevitra toy ny kolontsain'ny aterineto, fahalalahana maneho hevitra an-tserasera, teknolojia sy zo nomerika, ny zon'olombelona, ​​ny fahasamihafana sy ny fisoloana tena, ary ny fahasamihafana amin'ny fiteny ny tantaran'ny Global Voices.
Ny tonian-dahatsoratry ny faritra dia hiaraka hiasa ihany koa amin'ireo mpandray anjara na vondrom-piarahamonina isan-karazany izay manoratra lahatsoratra, mizara hevitra hotantaraina ary mametraka ny fandaharam-potoana famoahana ho an'ny faritra amin'ny alàlan'ny fanolorana hevitra, amin’ny alalan’ny fizaràna fahalalana ary fanomezana fitarihana.
Ny asan'ny tonian-dahatsoratra dia :
Mitarika sy mampivoatra ny ekipa tompon'andraikitra amin'ny fanaovana tatitra momba ireto firenena manaraka ireto: Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Uzbekistan, Tajikistan ary Turkmenistan.
Ny fanoratana, ny fanamarinana ny zava-misy ary ny fanitsiana ireo lahatsoratra manasongadina ireo olana goavana tena manintona indrindra avy amin'ny loharanom-baovao an-tserasera ao amin'ny faritra
Maharaka ny fivoaram-baovao , ny feo ary ny fironana manerana ny haino aman-jery sosialy sy fanaovan-gazetin'olontsotra ao amin'ny faritra
Mamolavola angondrakitra iray ahitàna ireo loharanom-baovao an-tserasera azo antoka sy voamarina ao amin'ny faritra misy azy ireo
Manamora ny fivoriana virtoaly momba ny asa famoahana lahatsoratra hanangonana sy handrafetana hevitra ary hitarika momba izay mitranga ao amin'ny faritra
Manatrika fivoriana ary mandray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra iarahana amin'ireo mpiara-miasa ao amin'ny efitrano fanaovan-gazetin’ny Global Voices sy ireo rantsana hafa
Miaraka miasa akaiky amin'ireo haino aman-jery mpiara-miasa mba hisafidy sy hamerina ireo tantara sahaza ho an'ny mpihaino manerantany, ary hampiroborobo sy hamoaka indray ny tantaran'ny Global Voices any amin'ireo tranokala mpiara-miasa.
Mijanona mifandray tsy tapaka amin'ny efitrano fanaovana gazetin'ny Global Voices sy ny vondrom-piarahamonina midadasika mba handray anjara amin'ireo tetikasa iraisan'ny faritra.
Miasa mifanaraka amin'ireo taridàlana ho an'ny famoahana, ny iraka tontosaina ary ny kolontsain'ny vondrompiarahamonina Global Voices.
Ireo kandidà tafita amin'ny toerana dia:
mahafehy tsara ny fomba fiteny, fanoratana ary fifandraisana amin'ny fiteny anglisy
mahafehy tsara ny fomba fiteny, fanoratana ary fifandraisana amin'ny fiteny Rosiàna
manana ny fahaizany voamarina amin'ny resaka fitadiavaana loharanom-baovao sy fanoratana vaovao
Afaka manoratra mampihetsi-po ary amim-pahalalàna tsara ireo olana eo an-toerana ho an'ny mpihaino manerantany
Mahatakatra tsara ny olana mifandraika amin'ny firenena any Azia Afovoany Lehibe, ary tsara ny fitsaràny ny famoahana lahatsoratra momba ny olana'ilay faritra
Mahafantatra tsara ny fampahalalam-baovaon'olom-pirenena, ny haino aman-jery mahazatra, ny fihetsiky ny gazety eo an-toerana sy ny media sosialy ao amin'ny faritra, ao anatin'izany ny fahalalana ny haino aman-jery sosialy sy ny feon'ny olom-pirenena azo itokisana ao amin'ny faritra.
Mahafantatra ny zo nomerika, ny fahalalahana maneho hevitra ary ny olana mifandraika amin'ny fikatrohana ao amin'ny faritra
Mahazo aina tsara rehefa miaraka miasa amin'ny olon-kafa, ao anatin'ny tontolon'asa iray virtoaly tanteraka izay zara raha voarindra .
Mahay tsara ny fampiasàna solosaina.
Manana fidirana azo antoka amin'ny Aterineto haingam-pisosa.
Afaka manokana 10-15 ora isan-kerinandro ho any asan'ny Global Voices
Afaka maneho fanolorantena matanjaka amin'ny iraka sy ny soatoavin'ny Global Voices.
Omena tombony ireo mpilatsaka hofidiana manana fahalalana ny fiteny ao Azia afovoany, ao anatin'izany ny Dari, Kazakh, Kyrgyz, Mongolian, Pashto, Tajik, Turkmen, Uyghur, ary Uzbek.
Fikambanana manerantany sy virtoaly ny Global Voices. Ny milana manodina ny efitrano fampahalalam-baovao Global Voices dia ekipa mpanonta miasa tapa-potoana izay miaraka miasa amin'ireo mpandray anjara sy mpandika teny an-tsitrapo eran'izao tontolo izao mba hanasongadinana ireo tantara sy fomba fijery izay zara raha aseho amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra.
Tsy misy fepetra ara-jeografika takiana mifandraika amin'ireo toerana ireo. Tsy manana birao na foibe ny Global Voices. Ireo mpilatsaka hofidina dia tokony hahazo aina amin'ny fametrahana ny fandaharam-potoanan'izy ireo manokana sy ny fiasàna anaty tontolo iray virtoaly tanteraka.
Tena asainay manokana mba hisoratra anarana ireo mpirotsaka an-tsehatra mandray anjara amin'izao fotoana izao amin'ny tetikasa Global Voices.
Tapa-potoana no iasana amin'io toerana io ary horaisina ho toy ny fifanarahana tsy miankina.
Alefaso amin'ny jobs@globalvoices.org ny famintinana sy taratasy filazana fahavononana, atao amin'ny teny Anglisy, izay manasongadina ny asanao ary manazava ny antony mahatonga anao ho mendrika tsara amin'ilay toerana, ka lohahevitra ny hoe: Tonian-dahatsoratra ho an'i Azia Afovoany Lehibe: ny anaranao. Azafady, ampidiro ho toy ny failo .doc na .pdf araikitra, ankoatra ny fampidirana azy ao anatin'ny votoatin'ny imailakao, ilay tatarsy filazana fahavononana.
Ny fetra fisoratana farany dia amin'ny 14 feb 2021, 11:59 alina EST (GMT -4).
5 ora izayEtiopia
8 ora izayAzia Afovoany sy Kaokazy